डाक्टरमाथि हातपात भएपछि ओपिडी सेवा बन्द « AayoMail
डाक्टरमाथि हातपात भएपछि ओपिडी सेवा बन्द
झापा – डाक्टर दिपक साहमाथि हातपात भएपछि झापा मेचीनगर नगरपालिका-१० आम्दा मेची अस्पतालको ओपिडी सेवा आइतबारदेखि बन्द भएको छ। डाक्टर साहमाथि हातपात भएपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित हुँदा सेवा प्रभावित भएको हो। डाक्टर साहमाथि हातपात गर्ने व्यक्तिउपर कारबाही तत्काल नगरे अस्पतालको इमरजेन्सी सेवासमेत ठप्प पार्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले चेतावनीले दिएका छन्।
फुड पोइजन भएर उपचारका लागि ल्याइएका मेचीनगर-९ का बृहस्पति सुबेदीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै आफन्तले डाक्टर साहमाथि हातपात गरेका हुन्। ८२ वर्षीय बृहस्पतिलाई अन्तिम अवस्थामा अन्यत्र रिफर गरेर अस्पतालले लापरबाही गरेको भन्दै आफन्त आक्रोशित भएका हुन्। ‘अक्सिजन मापन गर्ने उपकरण पनि बिग्रीएको रहेछ। अक्सिजनको लेबल ५ प्रतिशत पुगेपछि बल्ल अस्पतालले हजुरबुबालाई रेफर गर्यो’, मृतकका नाति शिशिर ढकालले भने, ‘अस्पतालको लापरबाहीका कारण हजुरबुबाको मृत्यु भयो।’
शनिबार जंगलबाट ल्याएको मोरङ्गे साग खाँदा मृतक बृहस्पतिसँगै उनकी श्रीमती र छोरी बिरामी परेका थिए। उनीहरू तीनैजनालाई उपचारका लागि आम्दा मेची लगिएको थियो। दुईजनाको स्वास्थ्यमा सुधार आएपनि बृहस्पतिलाई उपचारका लागि अन्यत्र लैजाँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएको थियो।
बृहस्पतिलाई रिफर गर्दा ड्युटीमा रहेका डा. दिपकले लापरबाही गरेको मृतकका आफन्तको भनाइ छ। डाक्टर साहले बिरामीलाई आइसियुको आवश्यकता पर्ने भन्दै आइसियु भएको अस्पतालमा लैजान रिफर गरेका थिए। अन्तिम अवस्थामा बिरामीलाई अन्य लैजान किन रिफर गरेको भन्दै मृतकका आफन्तले डाक्टर साहमाथि हातपात गरेको अस्पतालका प्रमुख डा. पोषणरमण त्रिपाठीले बताए।
‘महामारीको यस्तो बेलामासमेत उपचारमा खटिएका चिकित्सकमाथि हातपात गर्नु गलत हो’, डा. त्रिपाठीले भने, ‘बिरामीको अवस्था हेरेर नै डा. दिपकले आइसियु भएको अस्पतालमा रेफर गरेको र बिरामीकै परिवारले गरेको ढिलाईका कारण बिरामीको बाटैमा मृत्यु भएको हो।’ पहिलेदेखि नै मुटु र प्रेसरको बिरामी र उमेरसमेत बढी भएका कारण फुड पोइजनले बिरामीलाई सिकिस्त पारेकाले पनि आइसियुमा राख्न आफन्तलाई सुझाव दिएको डा. त्रिपाठीले बताए।
शनिबार बिरामीको मृत्यु भएपछि आइतबार घटनाका बारेमा सर्वपक्षीय छलफल गर्न अस्पताल सहमत भएको थियो। पूर्ववत् सहमतिबाट अस्पताल पछि हटेको र आक्रोशित आफन्तले डाक्टर साहलाई कारबाहीको माग गर्दै चर्को आवाज उठाएपछि अस्पतालले हातपात गरेको अरोप लगाएको नाति शिशिरले दाबी गरे। आम्दा मेचीका डा. सुदेश खनालले घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘चिकित्सकमाथि हातपात हुनु अपराध हो। घटनाको छानबिन नहुञ्जेलसम्मका लागि अस्पतालको इमरजेन्सी सेवासमेत ठप्प हुन्छ।’